‘रिया दा’हाललाई के भ’यो ? (भिडियो) – Life Nepali
आन्ग्छेंन लामाको डिओपी रहेको भिडियोको सम्पादन भुपेन्द्र अधिकारी,कलर रेनिश फागो,प्रोडक्सन मेनेजर आकाश रावल र समिप सापकोटा रहेका छन्। भिडियोको निर्माता ज्योति लोहार टोटो हुन् । भिडियो जेआर म्युजिकको अफिसियल च्यानल मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।***याे समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल डबल क्लिक गर्नुहोस*****,
Previous माया पलायो भन्दै साउदीबाट आचानक बिष्णु बिक्रम किन आए नेपाल? हेर्नुस एस्तो छ रहस्य (भिडियो सहित)